ပန်ဒိုရာ: နှစ်သစ်ရဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းများ
သူက ဟိုဘက် ကမ္ဘာခြမ်းမှာနေတယ်
ကိုယ့်ကဗျာ အပိုင်းအစလေးတွေကို သဘောကျလို့ တဲ့
သူ ညအိပ်ရာဝင်ချိန် ဖတ်ချင်တယ်ဆိုလို့
အိမ့်ချမ်းမြေ့ဆိုတဲ့ မလေး ရယ်..
ဇန်န၀ါရီ ၂၂ ရက်နေ့က ကျရောက်တဲ့မွေးနေ့အတွက်
လ ရေ လေ ဆောင်း တွေနဲ့
အေးချမ်းတဲ့ မ သောကကင်းကွာ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
အများအတွက် ခေါင်းထဲမှာ အမြဲရှိနေတယ်
အဲ… ခြူကလေးကိုလည်း သိပ်ချစ်သတဲ့
ဟောဒီ စာကလေး ကပေါ့
ဒီနေ့ ၂၃ ဇန်န၀ါရီမှာ ကျရောက်တဲ့
အေးချမ်းတဲ့ အနာဂတ်တွေ ပိုင်ဆိုင်ပါစေ။
အရေးအကြီးဆုံး တစ်ခု ကျန်သေးတယ်
Valentine's Day မတိုင်မီတော့ လာပေးဖြစ်မှာပါ .. ဟီး
ကဲ ပါစင်နယ်တွေ များသွားပြီ။
တခါတလေလည်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပေါ့ နော်။
Posted by pandora at 9:14 PM
(နောက်ထပ် ဘာလက်ဆောင်မှ မလိုတော့ဘူးနော်. . . တကယ် . . . တကယ် . . .)
မပန်ရေ - မိသားစုနဲ့ အဝေးမှာ ပထမဆုံး ဖြတ်သန်းရတဲ့ မွေးနေ့ဖြစ်လို့ အထီးကျန်ပြီး အိမ်လွမ်းနေရမယ်ထင်ခဲ့ပေမယ့် Blogger မောင်နှစ်မတစုရဲ့ ဖေးမ ပျော်ရွှင်စေမှုကြောင့် ထင်မှတ်မထားလောက်အောင် စိတ်ချမ်းမြေ့ခဲ့ရပြီး အချိန်ကုန်တွေတောင်မြန်နေခဲ့ပါတယ်။ အခုလို တကူးတက ပို့စ်တင်ပေးတဲ့အတွက် အထူးပဲ ကျေးဇူးပါတယ်။
ချစ်စရာကဗျာလေးတွေ စပ်တတ်သော မပန်ရဲ့ ကဗျာတွေထဲက
ပါးပြင်နဲ့ မှီအုံး အချိန်လေးတွေကို ရင်ခုန်နေတတ်ဆဲပါ..
ပင်လယ်ကမ်းရယ်.. ၀ိုင်လေးနှစ်ခွက်ရယ်.. ပန်းဖြူလေးတစ်ပွင့်ရယ်.. နဲ့
ခုလို နွေးထွေးမှုတွေကို ခံစားရတော့..
ဘလော့ဂါတွေကို ပိုပိုပြီးချစ်ပြီး ပိုပိုလို့ မခွဲနိုင်ဘူး မပန်ရယ်..
မလေး၊ မောင်ပွတ် နှင့် မနိုင် အားလုံးပဲ ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေ၊ မွေးနေ့ရှင်ဖြစ်တဲ့ မလေးက ဘလော့ဂ်ကေးရှင်း ယူနေလို့ မပန်ရဲ့ ပို့စ်မှာပဲ ဆုတောင်းပေးလိုက် ပါတယ်၊ အားလုံး အဆင်ပြေကြပါစေ၊